Home ASIAN STARS Fyodor Smolov Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadal aan la isku qorin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee Ruushka kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska; "Fedor". Dabeecaddayada Fyodor Smolov Smile iyo Sheekooyinka Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF-Pitch (wax yar) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba waa ogyahay in Fyodor uu dhaliyay goolal badan oo xirfadiisa ciyaareed ah. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa wax badan ka ogaanaya Fyodor Smolov's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Fyodor Smolov Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
Fyodor Mikhaylovich Smolov wuxuu ku dhashay maalintii 9th Febraayo 1990 hooyadiis, Irina Smolova iyo aabe, Mikhail Smolov oo Saratov, koonfur galbeed Russia. Waxa uu ku dhashay wiilkiisa oo kaliya iyo ilmo uu ka helay patents konservative.
Sida caruur ah, qoyska Fyodor ayaa ku noolaa xaafad kudhacday magaalada Saratov ee ku taalla daafaha Ruushka. Tani waxay ka dhigtay qalab waalidkiis dhowr siyood oo looga ilaaliyo wiilkooda inay saameyn xun ku yeeshaan wiilasha. Si kale looga fogaado in wiilkiisa uu la kulmo saaxiibo xun, aabihiis Mikhail ayaa Fyodor u qaaday kooxda kubada cagta ee magaalada, Sokol si uu u diiwaan geliyo. Nasiib darro, Fyodor Smolov ma ahayn taageere ka tirsan naadiga kubadda cagta ee magaaladaSokol Saratov) halkaasoo aabihiis uu ku soo qaatay si uu u bilaabo xirfaddiisa dhalinyarada. Qalbigiisuna wuu la jiray "Lokomotiv Moscow" oo ku yaala Russia caasimada. Tani waxay aheyd meeshii uu ku riyooday in uu bilaabay xirfadiisa.
Waxa uu ku riyooday inuu maalin uun xubin ka noqdo kooxda. Markii uu ogaaday inaysan jirin maaliyad dhaqaale oo ay ku dheehan tahay, Fyodor Smolov ayaa sii waday kooxda oo uusan taageereen. Go'aanka aabihiis wuxuu saameyn xun ku yeeshay guusha uu ku gaaray dhalinyarada.
Fyodor Smolov si joogta ah ayaa ugu dhibtooday inuu la qabsado kubadda cagta dhalinyarada. Waxa uu xitaa ku fashilmay imtixaanadii kubada cagta ee da'diisu ahayd 14. Tani waxay ahayd wakhti uu aabihiis bilaabay inuu dareemo in uu yaryar yari la xirxiray oo uu u daalay ciyaaraha. Aabihiis ayaa markaas ku adkaystay in wiilkiisa uu qaadanayo imtixaankii ugu dambeeyay ee kubadda cagta, kooxdan oo kale. Mikhail ayaa ku soo gabagabeeyay in wiilkiisa uu joojin lahaa kubada cagta haddii uusan ku guuleysanin imtixaanka afaraad ee soo socda.
Nasiib wanaag, Fyodor wuxuu baaritaan ku sameeyay kooxda cusub ee kubadda cagta ee Saturn oo ka yimid Yegoryevsk, gobolka Moscow. Waxay si farxad leh u qireen dhalinyarada da'da yar ee rajada u leh iyo Fyodor inay sii wataan xirfadahooda ciyaaraha uu jecel yahay. Ugu danbeyntii wuxuu dhammeeyey xirfaddiisa dhalinyarada ee Saturn Moscow halkaasoo uu udhexeeyay 2006 ilaa 2007.
16, Fyodor Smolov ayaa saxiixay heshiiskii ugu horeeyay ee xirfadlaha ah ee Dinamo Moscow. Waqtigaan, waxa uu noqday mid si qoto-dheer u go'aamiyay inuu riyadiisa ku rumoobo riyadiisa iyo hamigiisa inuu noqodo mishiinka goolka kaliya ma ahan mid soo jiidasho leh. Ilaa hadda sida sheekada xirfadeed ee uu khuseeyo, twuu nasanayaa, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Fyodor Smolov Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Gadaal kasta oo weyn, waxaa jira haweeney weyn, ama sida hadalku u socdo. Dhamaan ciyaaryahan kasta oo guuleysta kubadda cagta Ruushka, waxaa jira gabadh quruxsan, wag ama saaxiibbo. Shaki la'aan, awoodda Fyodor ee awoodda u leh, iyo sidoo kale qaab nololeedkiisa oo ka soo jeeda garoonku wuxuu abuuraa sawir buuxa oo isaga ah.
2012, wuxuu la kulmay qaabka Ruushka iyo marti-geliyaha TV-ga Victoria Lopyreva ee saaxiibkiisa (Yuri Zhirkov's) xafladda dhalashada. Ka soo jeeda quruxdeeda, waxaa muhiim ah in la sheego in Fiktooriya ay ahayd guusha Miss Russia 2003.
Qodob kale oo muhiim ah in la ogaado waa; Victoria Lopyreva waa sannadihii 7 ka waynaa ninkeeda. Xaqiiqadan, si kastaba ha ahaatee, kama horjoogsanayn xiriirka ay ku hayaan jaceylka dhabta ah ee soo koraya iyo tan ka sii muhiimsan, soo jeedinta guurka kaasoo dhacay [no-ring]. Bishii Disembar ee 2013, Lopyreva iyo Fyodor waxay lahaayeen aroos qurux badan oo jacayl ah Maldives. Guurkooda waxay soconayeen kaliya labo sano ka hor inta aysan kala qaybin. Labada dhinacba waxay joojiyeen wada xidhiidhka July 2016.
Sababta faahfaahsan ee furiinkooda hoos ku xusan ee Fyodor Smolov Facts of Family sida sharaxay by hooyada Fyodor. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta Ruushka ayaa soo warisay in furitaanku yimid markii Fyodor Smolov lagu yiraahdo Miranda Shelia, oo ah sawir kale oo Ruush ah oo hoos ku sawiran.
Waa arrin ku xiran tahay in Miranda (sawirka kor ku xusan) inta badan la barbar dhigo Irina Shayk, hab kale oo qurux badan oo loo isticmaali jiray Cristiano Ronaldo 'lover. Ka dib markii Ruushka uu soo bandhigay qaab ciyaareed liita ee 2016 UEFA European Championship, Fyodor ayaa jabiyay saaxiibkiisii ​​Miranda Shelia.
Mar labaad, 2016, warbaahinta Ruushka ayaa soo warisay jacaylka jacaylka ayaa bilaabay in ay la kulmaan Sofia Nikitchuk oo ahaa qofka ku guuleystay 2015 Miss Russia.
Fyodor Smolov Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka Qoyska
Hooyo: Irina Smolova hoos ku sawiran iyada oo wiilkeeda jecel yahay hooyada Fyodor.
Fedor Smolov hooyadeed ayaa si faahfaahsan ugu faahfaahisay furitaankii wiilkeeda oo leh model iyo TV-ga Victoria Lopyreva. Waxay qirtay in wiilkeeda wadnaha uu jabsaday xaaskiisa oo qaadatay waqti badan iyada oo ay daryeeleyso xirfadeeda ayna ahayn ninkeeda baahida shucuureed iyo shakhsi ahaaneed.
Irina ayaa sheegay in ciyaartoyda iyo qaabka ay labaduba ay ka soo kabsadeen xanuun. Waxay iyada iyo Fiktooriyaba xiriir wanaagsan la yeeshay, iyo gabadhii hore ee ku tiil sharciga ayaa si wacan ugu yeertay hooyo. Erayadeeda ...
"Seddaxdii sano ee ay wada joogeen, waxaan la dhisay xiriir aad u wanaagsan, iyada oo ahayd mid aad u taabatay oo sharaf leh, markii ay iigu yeedhay hooyaday. Vika iyo aniga waan u gudbinayaa si caadi ah caadi ahaan ".
"Ma dhihi karo, dabcan, laakiin laga yaabee inayan awoodin inay badbaadiyaan xiriirkooda. Waayo, Fyodor way igu adagtahay. Waxaan qabaa, wuu jecel yahay. Waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood, masaafada ay door weyn ka ciyaaraan.
Marka Fyodor uu tababar ku qaato xerada tababarka, Victoria waxay sidoo kale mashquul ku tahay inay xirfad u samayso - iyada oo ah telefishin iyo moodhaal furan, waxay ku guulaysatay, baahida weyn iyo shaqadeeda waxay u baahan tahay dadaal badan. Meesha, waxay soo baxday, waxay ahayd wakhtigii la'aanta Fyodor. Waa qof jecel raaxada guriga, dareenkiisa. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta ay gabadha u go'aansatay inay la joogaan isaga, waa inay ku haboonaato ".
ayuu yidhi Irina Smolova (hooyada Fyodor Smolov).
Fyodor Smolov Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Fyodor Smolov wuxuu jecel yahay tattoos. Ciyaartu waxay lahayd tattoo-keeda ugu horeysay ee 17, haddana ma sheegi karo inta jeer ee uu dhadhansanaa. Dhamaan tayadiisa oo dhan ayaa fiyooba oo samee sawir muuqaal ah sida muuqaalka sawirka hoose.
Waxa uu taageerayaa AC Milan tan iyo markii 1997 / 98 xilli ciyaareedkii hore George Weah iyo Andriy Shevchenko sida ciyaartoydiisa jecel carruurnimada.
Tabaraha Fyodor: Wuxuu ka soo baxaa muujinta dareenka. In badan oo sidaas ah, wuxuu noqon karaa mid cakiran, oo aan raali galin oo aan saaxiibtinimo lahayn.
Maxay Fyodor Jeceshahay: Wuxuu necbaanayaa ballanqaadka jaban, isagoo cidlo ah, xaalado caajis ah ama xaalado caajis ah, dadka ku khilaafsan isaga.
Cabsida ugu weyn ee Fyodor ayaa la arkaa mid xadidan ama xadidan. Tani waxay ka dhigeysaa mid qabow iyo xasaasiyad. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu leeyahay hab difaac ah oo ka hortag ah isu-dhowaansho hore. Fyodor wuxuu u baahan yahay inuu barto sida loo aamino dumarka, sidoo kale inuu u muujiyo caadifadkiisa hab caafimaad leh.
Ciyaaryahanka kubadda cagta ayaa sidoo kale jeclaan lahaa inuu aqristo riyooyinka akhriska maalintiisa caruurnimadiisa sida hoos ku sawiran.
Baadhitaano Dembiile ah oo la yiraah Mario Mario Puzo iyo Arturo Pérez-Reverte, Fyodor Dostoevsky's works, iyo Mikhail Bulgakov shuqulladiisa waa buugiisa ugu xiisaha badan.
Fyodor Smolov Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Ma ahan mid faraxsan oo leh Naadiyada Big Europe
Fyodor Smolov ayaa mar uu u sheegay Maxim Online in kooxo ajaaniib ah ay mar walba dareemayaan inay ka caga jiidayaan ciyaartoyda Russia. In uu erayada ...
Kooxaha heerka hoose ee Champions League ma ciyaari doonaan si ay nagu soo qaadaan. Waxaan arkay intii lagu jiray suuqa kala iibsiga. Waxaan lahaa dalabyo qaar, laakiin waxay dhammaantood deyman lahaayeen xuquuqda iibsashada. Kooxo badan oo yurub ah ayaa naga dhigaya kuwo naga qarsoodi ah.
Smolov ayaa intaa ku daray in ay jiraan qaar ka mid ah riyooyinka qaar ee Yurub marka ay timaado ciyaartoyda Ruushka.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta nooceeda Fyodor Smolov Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
BADBAADADA CARRUURTA CARRUURTA
DUGSIYADA DHEERAAD EE AAD UGU HADLAN
Waxaa laga yaabaa 3, 2018